Ninka Gawraca u qaabilsan Kooxda Daacish oo la ogaadey qofka uu yahay+SAWIRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Ninka Gawraca u qaabilsan Kooxda Daacish oo la ogaadey qofka uu yahay+SAWIRO
Ninka wejiga qarsada, dharka madowna ku labista, isla amrkaana leh lahjadda dadka British-ka, kaas oo gawracey dhawr qof oo ISIS afduub u haysteen ayaa magiciisa saxda ah lagu sheegay Maxameed Emwazi, sida laga soo xiganayo warbixin dheer oo ay qortey wargeyska Washington Post.
Washignton Post ayaa sheegtey in Emwazi uu ka dhashey qoys ladan, kuna barbaarey Galbeedka London wuxuuna ku jiraa da’diisa 23 -29. Waxaa la aaminsan yahay in sanadkii 2012 uu galey dalka Siiriya, halkaas oo kooxaha Jihaadiyiinta ah uu ka mid noqdey.
“Wax shaki ah iigama jiro in Maxammed Emwazi uu yahay John Jihad” sidaas waxaa wargeyska WP u sheegey mid ka mid ah saaxiibdiisa aadka ugu dhawaa, kaas oo kamid ahaa dadka kashifey “waxa uu ahaa walaalkey oo kale… waan hubaa in uu isaga yahay” ayuu yiri.
Magaca John Jihadi waxaa u bixiyey qaar kamid ah dadkii ISIS afduubka u haysan jirtey ee madax-furashada lagu siidaayey.
Jariirada Washington Post ayaaa warbixinteeda dheer uga sheekeysey, in Maxammed Emwazi uu ka baxay Jaamacadda Westminister magaalada London isaga oo bartey Computer Programing, uu ahaa nin debci wanaagsan leh saaxibadiisna aad u jeclaayeen.
Sanadkii 2009 markii uu jaamacadda dhameeyey ayaa isaga iyo laba nin oo saaxiibadiisa mid yahay Jarmal islaamey magiciisana lagu sheegay Cumar iyo nin kale oo la yiraahdo Abu Talib safar ku aadeen Safari dalka Tansaaniya, laakiin waa u suurta geli weydey waxaana laga soo celiyey garoonka diyaaradaha iyaga oo habeen halkaas lagu hayey, dib ayaana loo soo tarxiiley.
Emwazi ayaa la sheegey in uu soo mareen magaalada Amestardam, waxaana uu sheegay in nin ka socda hay’adda Sirdoonka ee Britain MI5 uu su’aalo kuweydiiyey kuna eedeeyey in uu u socdey dalka Soomaaliya kana mid noqon lahaa al-Shabaab. Emwazi ayaa diidey eedeyntaas, waxaana uu sheegey in hay’adda MI5 isku daydey in ay shaqaaleysiiso oo ka dhigto Jaajuus, sidaas waxa uu u sheegey Asim Qureshi, oo ah cilmi baare iyo madaxa hay’adda xuquuqda isnaanka ee CAGE
Waxaana warbixintiisu ku soo baxdey sanadkii 2010 Joornaalka Independent ee ka soo baxa dalka Ingriiska isaga oo magiciisa ay ku sheegtey Muhammad ibn Muazzam, waxaana warbixintaas ka mid ahaa wiil Soomaali ah oo magiciisa la yiraahdo Mehdi Xaashi.
Emwazi iyo saaxiibadiis ayaa warbixinta WP qortey lagu sheegey in loo oggolaadey in ay dib ugu soo laabtaan Britian, waxaana uu isla sanadkii 2009 la kulmey Asim Qureshi, waxaana uu uga sheekeeyey sida aan caddaaladda ahayn ee loola dhaqmey.
Jariirada ayaa sheegtey in Emwazi uu go’aansadey in uu dib ugu noqdo dalkiisi hooyo ee Kuweyt, waxaana uu ka heley shaqo shirkad Kunbuyuutarada ah, sida laga soo xigtey email uu u soo direy Qureyshi, Waxaana uu dib ugu soo laabtey London si uu u dhamaystirto guur iyo aqalgal. Laakiin bishii Jun sanadkii 2010 ayaa hay’adda ka hortaga argagixisadu ee Britian u diideen in u dib ugu noqdo dalkiisi, waxay ka qaadeen faro-reeb waxaana ay u direen baritaan. Emwazi ayaa isku dayey in uu dib ugu noqdo dalkiisi laakiin waxaa laga qaadey Dukumentigiisi loona diidey in uu dib ugu safro Kuweyt.
Email kale oo uu u soo direy Qureyshi ayuu ku sheegey in uu shaqo ka haysto Kuweyt, aqal galna sugaayo halkaas, “waxaan dareemayaa in aan ahay qof xiran, laakiin aan ku jirin qol London gudaheeda”, “waxaana la iga hor istaagey dhamaan nolosheydi cusbeyd ee aan ka bilaabey dalkii aan ku dhashey ee Kuweyt” ayuu ku yiri Emailkiisa.
Qureyshi ayaa sheegaya in markii u danbeysey ee uu maqlo Emwazi ay ahayd bishii Janaayo 2012, waxaana uu ku tilmaamey nin doonaayey in uu isbedel cusub iyo nolol cusub uu samaysto laga hor istaagey laguna xanbaarey in uu noqdo denbiile geystey falal dunida oo dhan ka argagaxdo.
Lama oga qaabka uu ku galay Siiriya, waxaana dabagalkii hay’adaha sirdoonku ku xanbaareen in uu calaamad u noqdo arxandarada kadib markii uu ka soo muuqdey muuqaalo Video ah oo isdaba joog ah oo uu qaarkood si toos ah u fuliyey gawrac dad ay afduub u haysteen.
Warbixin ay soo saartey hay’adda CAGE ayey cinwaan uga dhigtey in John Jihaadi Britain ka dhigtey xagjir .
Sida uu qoray Web-ka telefishanka Channel 4 Scotland Yard waa diidey in ay wax hadal ah ka bixiso warbixinta Washington Post.